M/weyne Farmaajo oo hadda u dhoofaya Jabuuti & Itoobiya, Maxayse tahay ujeedadiisu.
JABUUTI(P-TIMES) – Madaxweynaha Soomaaliya Max’ed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidda ay ogaatay Warsidaha PuntlandTimes wuxuu hadda u dhoofayaa dalalka Jabuuti & Itoobiya, isagoo ku hormaraya magaalada Jabuuti oo uu kaga qeybgalayo Aaska maareeyihii Dekedaha Jabuuti oo ahaa walaalka Ismaaciil Cumar Geelle.
Wararka ayaa sheegaya in duulimaadka gaarka ah ee Madaxweynuhu ay joogayso madaarka Jabuuti, tan iyo saacadaha uu wada hadalo la leeyahay dhigiisa dalkaas Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle oo ay ka wada hadlayaan arrimaha ku saabsan xariirka labada dhinac.
Madaxweyne Farmaajo ayaa saxiixaya buugga Tacsiga ee Ismaaciil Geelle walaalkiis, waxaana ka dib u gudbi doonaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, halkaas oo ay wada hadal gaar ah ku yeelan doonaan Raysalwasaaraha Itoobiya Dr Abiy Ahmed.
Warar hordhac ah ayaa sheegaya in ay dhinacyadu ka wada hadli doonaan arrimaha ku saabsan xaaladdaha siyaasadeed ee gudaha dalka, oo ay Itoobiya iyo Xukuumadda Faderaalka iska kaashadeen sidii faragalin loogu sameyn lahaa Jubbaland.
Jubbaland, hadda waxaa ku sii jeeda Madaxweynaha Puntland oo hawada ku jira, waxaa kasii horeeyey Madax kala duwan, iyadoo ay maanta tagayaan Madaxdii hore ee Soomaaliya.